ETH/USD စမ်းသပ်မှု ၃၉၅၅ နည်းပညာခုခံရေး: ဆယ်လီဟို၏နည်းပညာသုံးသပ်ချက် ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ETH BitcoinEthereumNews.com
ETH/USD စမ်းသပ်မှု ၃၉၅၅ နည်းပညာကိုခုခံခြင်း၊ ဆယ်လီဟို၏နည်းပညာဆန်းစစ်ခြင်း ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ETH
Ethereum (ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြစ်ခဲ့သည် မတည်ငြိမ်သော အစောပိုင်း အာရှ pair တစုံအဖြစ် session ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှ 3229.16 အဆင့်အထိ အဖြစ်ကုန်သွယ်ပြီးနောက် အနိမ့် ထိုအဖြစ် 3111.14 အဆင့်အထိ အဆိုပါကာလအတွင်း မြောက်အမေရိက နှင့်အတူ session ကို နေ့နိမ့် ရုံ အောက်တွင် အ ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ တန်ဖိုးအကွာအဝေး မှ 3378.60 သို့ 3050မရ။ ကားမမောင်းခင် ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ အနိမ့် သို့ Multi- နေ့ကမတိုင်မီကုန်သည်များအမြန် ETH / USD ကိုရုပ်သိမ်း as မြင့်သော ထိုအဖြစ် 3388.20 အဆင့်အထိကိုယ်စားပြုသည် ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ တန်ဖိုးအကွာအဝေး မှ 3448.57 သို့ 3166.45။ ကုန်သည်များကလေ့လာကြသည် intraday အနိမ့် of 3111.14 ကိုယ်စားပြုသည် စမ်းသပ် ၏ ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ အကွာအဝေးတန်ဖိုးထား မှ 3009 သို့ 3583.48.
မကြာသေးမီကအောက်ပါ ရောင်းမည် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့် နှင့်ဒေသများ၏ အလားအလာနည်းပညာဆိုင်ရာခုခံ ပါဝင် 3399, 3519, 3640, 3789နှင့် 3811မရ။ ကုန်သည်များဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြသည် အလားအလာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု အဆိုပါန်းကျင် 2711.73 ဧရိယာ ကုန်သည်တွေကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ် 50-bar MA (၄ နာရီ) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 100-bar MA (၄ နာရီ) နှင့် အထက် အ 200-bar ကို MA (4 နာရီ) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ 50-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 100-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) နှင့် အောက်တွင် အ 200-bar MA (တစ်နာရီလျှင်).
စျေးလှုပ်ရှားမှုအနီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် 200-bar ကို MA မှာ (4 နာရီ) 3360.12 နှင့် 50-bar ကို MA (အလုပ်ချိန်) မှာ 3315.38.
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 1700 / 1633.51 / 1456.03 နှင့် မှတ်တိုင်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခုခံ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 3994.97 / 4384.43 / 4518.94 နှင့် မှတ်တိုင်များ အထက်မျှော်လင့်ထားသည်။
On 60 မိနစ် ဇယား, နင် is Bullishly SlowD အထက် စဉ်တွင် MACD is Bearishly MACDAverage အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော.
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ETH, ETHUSD, တွင်, ခုခံခြင်း, Sally, စက်တင်ဘာလ, စက်မှုလက်မှု, စမ်းသပ်မှုများ
Colin Kaepernick စီးရီးအတွက်ပထမဆုံး Trailer ကို Netflix ကဖြန့်ချိလိုက်သည်
Taco Bell သည်ရက် ၃၀ ကြာ taco စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုမကြာခဏစမ်းသပ်လည်ပတ်သည်